Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka eldgbọ mmiri Mkpuchi Mbara igwe
Welding Welding Mild steel ER44-8
H08MnA (EM12) maka imepụta arịa ụlọ ma ọ bụ ọgwụ…
ER70S-G the seelded seam nwere nnukwu tensile na…
ER304 uesd na boller kpo oku sunface pipe
ER310 maka otutu uzo MIG309L gbadoro uzo
E71T-1 Ejiri waya bụ ikuku ikuku ikuku CO2 maka ịgbado ọkụ titanium
ER316 / ER316L / ER316LSi maka igwe nkenke
H08A (EL12) waya waya dị nro maka ịgbadoro arc
ER70S-4 Ejiri maka weld akwa tensile steel na 490N / mm2…
H08MnMoA (EA2) maka ịgbado ọkụ agbadoro ọkụ na igwe anaghị agba nchara
Ngwa: Maka ịgbado ọkụ na ịgbado ọkụ na ịgbado ọkụ igwe, dịka 15MnVN, 15MnVNR, 15MnTiRe Kwesiri maka ịgbado ọkụ pipe-line steel dị ka X60, X65 wdg.
H10Mn2 (EH14) waya agbadoro arc
H10MnSi (EM13K) eji maka carbon steel na ala alloy steel nke di ala
Ihe dị mkpa maka ịgbado ọkụ nke carbon carbon na obere alloy steel welded steel, dị ka mmiri ọkụ. ụgbọ mmiri mgbali elu, ihe ọkụkụ nuklia osisi containers.we na-enye ndị nlele n'efu na onye na-ahụ maka ha n'efu. Anyị na-azụta mkpuchi ngwaahịa anyị niile. Business ga-azụ ahịa nchekwa.
H08MnA (EM12) maka imepụta arịa ụlọ ma ọ bụ arịa nrụgide
EM12 (H08MnA) bụ ụdị waya waya dị nro maka ịgbado ọkụ na agba. Gbado ọnụ na ọfụma kwesịrị ekwesị, eriri ịgbado ọkụ nwere ike nweta njiri mara maka arụmọrụ.
H08CrMoVA maka ịgbanye ọkpọkọ
H13CrMoA (EB2) Maka ịgbado ọkụ arịa na ọkpọkọ ọkpọkọ
anyị na-eme ọtụtụ ule. dịka ọmụmaatụ .tensile ike, elongation, V-ụdị na ihe ndị ọzọ.
H08CrMoA maka ịgbanye ọkpọkọ ọkpọkọ na ọkpọkọ ọkpọkọ
Ihe eji eme ihe , Flux Cored Wire Feeder , Flux Cored Arc Welding Wire ,